LEGO Boost Move Hub: Fandefasana loko loko, famerenana ary maro hafa - Ikkaro
firosoana >> kilalao >> Lego Boost Move Hub
El Kit robotika Lego Boost izany dia mifototra amin'ny ampahany mavitrika telo, manodidina izay iangonan'ny ambiny rehetra.
Ny tena zava-dehibe dia ny Move Hub izay misy motera misy famaky 2 sy ny modely Bluetooth hifandraisana amin'ny takelaka na finday. Satria ny zava-drehetra ao amin'ny Boost dia atao amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Ny sombin-javatra roa hafa dia motera faharoa ary mpanakaiky ny lokony sy ny lokon'ny loko.
Rehefa kely ny zavatra hitako momba ireo biriky ireo dia avelako eto daholo izay hitako ary mieritreritra aho fa mahaliana ny fampiasana azy tsara.
Raha te hahafantatra ilay kit ianao ary hahita izay manakana ahy, sokitra amiko LEGO Boost Guide
Kaody miloko LED Hub Hub
Ny Move Hub dia manana bokotra maitso sy LED izay manondro fanjakana samihafa, saingy tsy hitako fa azo idirana amin'ny app ity fampahalalana ity. Ka, rehefa avy nitady, teo anelanelan'ny tranonkala ofisialy sy GitHub, Avelako hanangona anao ny dikan'ny kaody loko tsirairay
Jiro fotsy manelatselatra misy tselatra fohy. Io no maody pareo. Ny fanindriana ny bokotra maitso dia manandrana mifandray amin'ny Bluetooth mandritra ny 20 segondra
Jiro fotsy manelatrelatra miaraka amina blink ela. Miverina indray ilay fitaovana
Jiro manga maharitra. Nifandray ny Bluetooth ary mandeha tsara ny zava-drehetra
Jiro volomboasary manjelanjelatra. Batterie ambany. Amin'ity tranga ity dia misy bateria 6 AAA (LR03 amin'ny 1,5V)
Jiro mena, maitso ary manga. Ny fampiharana ny takelaka na finday dia nanery ny fanavaozana ny firmware an'ny Hub Hub. Hifandimby ny lokon'ny blink. araka ny pejy ofisialy ny fanavaozana ny firmware dia tokony haharitra 15 minitra.
Sabemos que iray amin'ireo teboka malemy ao amin'ity kit LEGO ity ny firaketana azy. Manantena aho fa tsy ho ela dia hapetraka ny bateria ary hametraka izany sy azo idirana.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Hub Hub
Araka ny resadresaka ao ambadiky ny afisy tonga ao anaty boaty, ny fanelingelenana elektrômanetika mahery vaika dia mety hanakorontana ny fiasan'ny vokatra mahazatra. Raha izany dia avereno indray ilay vokatra ary tohizo ny fampiasana azy ara-dalàna.
Andao hamerina azy io. Ary noho izany, amin'ny sary izay anentanana antsika tsindrio ary tazomy ny bokotra Hub maitso mandritra ny 10 segondra.
Ahoana no hahafantaranao raha mifanaraka amin'ny LEGO Boost ny fitaovako
Ahoana ny fanovana ny batterie
Eo amin'ny farany ambany dia misy fonony misy visy. Mila esorinao fotsiny ilay izy ary esory ny sakana miaraka aminy batterie AAA roa tsiroaroa, izany hoe batterie 6.
Toa tsara eo amin'ny sary
Tsarovy fa namoaka tetika iray izahay tereo ny fifandraisana Bluetooth, rehefa tsy te-hiaraka ianao.
Sokajy elektronika, kilalao Ticket navigation
1 Kaody miloko LED Hub Hub
2 Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Hub Hub
3 Ahoana ny fanovana ny batterie
4 Lohahevitra hafa